Mudaaharaadyo Rabshado Wata oo dib uga bilowday Beerta Nasashada Gazi ee Fagaaraha Taksim ee Magaalada Istanbul – idalenews.com
Mudaaharaadyo Rabshado Wata oo dib uga bilowday Beerta Nasashada Gazi ee Fagaaraha Taksim ee Magaalada Istanbul
Habeenimadii xalay waxay u ahayd dalka Turkiga habeen rabshado iyo iska-horimaadyo. Ugu yaraan 40 000 kun oo qof ayaa dariiqyada Istanbul isugu soo baxay. Dadka Mudaaharaadayey ayaa jidadka xirey waxaana ay meelaha qaarkood ka shideen dab.
Booliska ayaa isku dayey in ay banneeyaan fagaaraha Taksim iyo beerta Gezi, iyaga oo isticmaalaya Biyaha awoodda leh iyo gaaska ilmada keenay. Booliska ayaa sidoo kale isku dayey in ay furaan jidadka la xirey.
Ugu yaraan 44 qogf ayaa ku dhaawacmey rabshadihii xaley ka dhacay Istanbul.
Dadka mudaaharadayey ayaa qabsadey Divan Hotel oo ku dhaw fagaaraha Taksim, waxaana ay Hoteelka bideen gabaad, iyaga oo ka dhigtey goob ay dhaawacyada ku daaweyaan iyo dadka indhaha wax ka qaba oo gaasku waxyeelay.
Raysalwasaaraha Turkiga Tayyip Erdogan mar uu ka hadlaaya isu soo bax ay taageerayaashiisu isugu yimaadeen ugu yeeray mudaaharaadayaasha iney baneeyeen fagaaraha oo ah goob dadka ka wada dhaxeysa isla markaasna urur gooni aha uusan laheyn. waxuuna Erdogan maalintii shalay ka digay in ciidanka Amaanku ay amar haystaan ay ku baneeyaan dhulkaasi danta guud ee sida gaarka ah Mudaaharaadayaashu u qabsadeen.
Idale News Online, Istanbul
Dowlada Masar oo Xiriirkii Diblamaasi u jartey Dowlada Siiriya ee Bashaar Al Asad
Jabhada ONLF ee ka dagaalanta Itoobiya oo ka hadlay Eedayn loo jeedshey iyo Aragtidooda Arrimaha Soomaaliya